एजेन्सी । अमेरिकाको मेरील्यान्डमा कारभित्र बसिरहेका एक व्यक्तिले ओठमा बलिरहेको चुरोट च्यापेर हातमा स्यानिटाइजर दल्दा वि स्फोट भएर कार खरानी भएको छ ।
फेडरल प्लाजा शपिङ सेन्टरको पार्किङ लटमा बिहीवार अपराह्न कारमा बलिरहेको चुरोट र स्यानिटाजरको सम्पर्कले विस्फोट गराएको हो । चुरोटको झिल्कोले स्यानिटाइजरलाई टिपेपछि कार पड्केको मन्टगोमरी काउन्टी फायर यान्ड रेस्क्युले जनायो ।
कालो टोयोटा कारमा आगो लागेपछि अग्निनियन्त्रकहरूले त्यसलाई निभाएका थिए । तर कार क्ष’तिग्रस्त भएको छ र कारचालकको हात र तिघ्रा डढेको छ । उनलाई स्थानीय अस्पताल लगिएको थियो ।
‘हावा राम्ररी आउनजान नपाउने कारभित्र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्दै चुरोट सल्काउनु खत’रनाक काम हो,’ दमकल विभागका प्रवक्ताले बताए ।
यो पनी पढ्नुहोस्ः शरीरमा मुसा आएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
काठमाण्डौ । धेरैजसोे मानिसहरुको शरीरमा मुसा आउने गर्छ। जसका कारण मानिसहरु हैरान हुने गर्छन्। शरीरमा मुसा भएका कारण नै दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु पनि आउने गर्छन्। मुसाका कारण नै सुन्दरतमा कमी आउने भएकाले मासिहरु बजारबाट विभिन्न मल्हमहरु किनेर लगाउने गर्छन्।
तर बजारमा पाइने सबै मल्हमहरुले मुसा नहट्न पनि सुक्छ। मुसा गाढा खैरो रंगको हुने गर्छ। मुसाको समयमै उपचार नगरेमा क्यानसर पनि हुन सक्छ। तसर्थ शरीरमा आएको मुसा हटाउनका लागि यी उापयहरु अपनाउनुहोेस्।
– केरा : केराको बोक्रमा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्व पाइन्छ, जसले मुसालाई हटाउन मद्धत गर्छ। त्यसैले केराको बोक्रलाई राति सुत्ने समयमा मुसा भएको ठाउँमा लगाउने।
– लसुन : लसुनलाई मुसा भएको ठाउँमा राख्ने र त्यसालई पट्टीले बाध्ने र केही समय यतिकै छोड्ने र त्यसपछि पानीले पखाल्ने। हप्तामा दुई पटकसम्म यो विधि प्रयोग गर्नाले मुसा हट्छ।
समुन्द्रमा करोडौँ टन माटो हालेर नयाँ शहर बनाउने याे देशकाे तयारी !
यामीले पाइन् विवाह लगत्तै फिल्म
फ्रान्सका राष्ट्रपति म्याक्रोनलाई सार्वजनिक स्थलमै च’ड्कन – (भिडियो)